3 Essentials အိုင်တီ Project မှပျက်ကွက်ခြင်းရှောင်ကြဉ်ပါထောက်ပြသည် | ယင်း
20 ဇန်နဝါရီ 2017
လုပ်ငန်းများ, မကြာခဏခန့်မှန်းရခက်နေကြသည်မရေမတွက်နိုင်တဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းများနှင့်ထည့်သွင်းသူတို့အားအမျိုးမျိုးသောအခက်အခဲများသိရှိစေရန်။ တကယ်တော့ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုရန်လိုအပ်ပါတယ်လမ်းကိုမသွားဘူးကိုတိုးချဲ့။ ကျနော်တို့မှန်မှန်လျော့နည်းနှင့်ကျွန်တော်နှင့်အတူပွင်နေထက်တစ် speedier အရှိန်အဟုန်မှာပိုမိုပြီးမြောက်ဖို့တောငျးဆိုခကျြကိုဖန်ဆင်းခံရတက်လေသည်။ အခုတော့တဖန်တုံ, ဒီနယ်နိမိတ်သျောလညျးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအတွက်အသီးအနှံများဖြစ်ကြသည်။
အတော်များများကသော့ချက်အစိတ်အပိုင်းများသို့သော်လိုအပ်သုံးခုမိတ်ဖက်အလိုဆန္ဒများနှင့်အလုပ်၏အတိုင်းအတာကိုကြီးကြပ်, မှတ်မိအထောက်အထားများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ဆွဲဆောင်မှုဆက်သွယ်ရေးနှင့်ကွဲပြားခြားနားသွားအကျိုးတူလိုအပ်ချက်များကို-မိတ်ဖက်ပေါ်ထွက်လာ, အကျိုးတူအောင်မြင်မှုမှထည့်ပါ။
လိုအပ်ချက်များ, Stakeholder မြျှောလငျ့နှင့်လုပ်ငန်းခွင်၏ Scope တိုးချဲ့
အပေါင်းအဖေါ်များသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်အကျိုးတူ-မှတဆင့်တစ်အကျိုးတူရွေးချယ်မှုကလွှမ်းမိုးခံရ, လှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်ဖြစ်ပေါ်-ဒါမှမဟုတ်သူတို့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးမှုခံရဖို့သူတို့ကိုယ်သူတို့မြင်ရလိမ့်မည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်လွှအကျိုးသက်ရောက်မှုသဘောသဘာဝအတွက်အပြုသဘောသို့မဟုတ်အပျက်သဘောဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အများစုမှာလုပ်ငန်းများမိတ်ဖက်တစ်ဦးကျယ်ပြန်အရေအတွက်ကိုရှိသည်။ အားလုံးမိတ်ဖက်အသိအမှတ်ပြုအကျိုးတူအောင်မြင်မှု၏ရိုက်ချက်တည်ဆောက်။ သငျသညျအရေးကြီးသောသူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်. အချက်အလက်များ, အလှနျမှီခို, သက်ရောက်မှု, အလားအလာပါဝင်လျက်, အကျိုးတူချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်, ကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးရလဒ်များအပေါ်ဖွယ်ရှိအကျိုးသက်ရောက်မှု secure နှင့်သတင်းပို့သင့်ပါတယ်။ ဒီဒေတာကိုလေ့လာဆည်းပူးခြင်းအပြီးတွင်၎င်းတို့၏ attribute တွေနှုန်းအတိုင်းမိတ်ဖက်သွင်ပြင်လက္ခဏာများဖြစ်ကြသည်။ ဒီအတိုင်းအဖော်နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်စနစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကလျော့နည်းတောင်းဆိုမှုများစေမည်။ key ကိုဆက်သွယ်မှုတခုတခုအပေါ်မှာတိုးချဲ့အာရုံအကျိုးတူအောင်မြင်မှုအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။
သင်ဘယ်လိုအလိုဆန္ဒများကိုကြီးကြပ်မလဲ ဆက်သွယ်ရေးကတဆင့်။ ဒါဟာအလွန်စရိုက်လက္ခဏာတွေဆက်သွယ်ရေးအဆိုပါအကျိုးတူနှင့်မိတ်ဖက် fit မှစိတ်ကြိုက်စီစဉ်ရှိပါတယ်အရေးကြီးအရေးပါပါတယ်။
အခြေခံပင်ကိုယ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြေရှင်းနေဖြင့်လေ့လာသင်ယူဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန (PMI®) က, ကမကြာသေးမီကပြောနေတာဖို့ကန့်သတ်မထားဘူးစခွေငျးငှါအဖြစ်ဖြစ်, တစ်ဦးဖက်စပ်ဒါရိုက်တာရဲ့အလုပ်အကိုင် 90 ရာခိုင်နှုန်းကိုဆက်သွယ်ရေးကြောင်းပြသသည်။ တရားဝင်ဆက်သွယ်ရေးဒါပေါ်မှာအတွက်စာအစီရင်ခံစာများ perusing, အစီရင်ခံစာများအတွက်လာမည့်ပေါ်သို့ထို့နောက်တဦးတည်းစုရုံးနဲ့စတင်ပြီးဒေတာ sifting နှင့်ပါဝင်သည်။ လုံလောက်စွာဒီလိုလုပ်ဖို့, သင်စီစဉ်တစ်ခုပတ်လည်သွင်ပြင်လက္ခဏာဆက်သွယ်ရေးအုပ်ချုပ်မှုလိုအပ်သည်။ အဘယ်သူသည်အဘယ်သို့လျှင်, အဘယ်မှာရှိမည်သို့နှင့်အဘယ်ကြောင့်: ဤကဲ့သို့သောမည်သည့်အစီအစဉ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုမရပ်မနားဟုမေးသင့်ကြောင်းခြောက်လမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များသို့ကွဲကွာရနိုင်သနည်း
အဘယ်သူသည်ရန် imparted သင့်သနည်း
အဘယ်အရာကို imparted သင့်သနည်း
အမှတ် at အခါဖြစ်ပျက်ဖို့လိုအပ်ပါသလဲ?
သင့်ရဲ့အကျိုးတူမစတင်မီသင်တို့ရှိသမျှသည်ရည်ရွယ်ချက်များ, နေရာများနှင့်လိုအပ်ချက် elucidated ရှိသည်ဟုအာမခံပါသည်။ လိုအပ်ရာပေါ်နှင့်သိသာထင်ရှားသောမိတ်ဖက်မှနောက်ဆုံးအထိကောက်နေဝယ်ယူမှာရှင်းလင်းပြတ်သားရယူခြင်းအရေးပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားလိုအပ်ချက်များကို, ဆက်စပ်ရည်ရွယ်ချက်များ, ပစ်မှတ်ကိုကယ်နှုတ်အတူ, ကိုလက်စသတ်ရမည်ဖြစ်သည်နှင့်သင့်အကျိုးတူ၏ဘဝကျော်မွမ်းမံမည်ဖြစ်ကြောင်းအလုပ်၏အတိုင်းအတာသို့လှည့်။ က may ကဲ့သို့ဖြစ်ရ, သင်ပြီးမြောက်ရန်ကြိုးစားနေပါတယ်အရာ၏ခိုင်ခံ့သဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းနဲ့စတင်ကြဘူးသောချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်, သင်စိတ်ကူးစိတ်သန်းမဆိုလမ်းပိုင်းအားဖြင့်မစတင်သင့်ပါတယ်။
ဒါဟာသူတို့ရဲ့အကျိုးတူပိုင်းခြားသိမြင်ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒများကိုရည်မှတ်ရှင်းလင်းပြတ်သား၏မရှိခြင်းလည်းမရှိလျှင်မိတ်ဖက် '' ရှုထောင့်ကနေတိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေခြင်းငှါ, ဒုက္ခ, လျှင်မကူးရလိမ့်မည်။ ဤအခွအေနမြေားအောက်မှာမျှော်လင့်ထားနိုင်အဖြစ်မိတ်ဖက်ခွဲခြားနှင့်အကျိုးတူဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်းထဲမှာအချိန်ပေါ်မှာ right အဖြစ်ခွဲဖြာမိမိတို့၏အလိုဆန္ဒများရမည်ဖြစ်သည်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။
အကျိုးတူစီစဉ်များကြားတွင်အကျိုးတူမိတ်ဖက်တစ်ဦးဆွဲဆောင်မှုဆက်သွယ်ရေး၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်အသုံးချစီစဉ်များနှင့်အကျိုးတူလိုအပ်ချက်, မိတ်ဖက်အလိုဆန္ဒများနှင့်အလုပ်-မှာသွေးထွက်အစွန်း၏အတိုင်းအတာများတိကျတဲ့ယိုယွင်းပျက်စီးလာ၏တရားဝင်ကွဲပြားသက်သေများ၏သုံး key ကိုအပြင်းအထန်လုပ်ဆောင်-မှတ်မိအထောက်အထားများနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Keeping နှင့်သေဒဏ်စီရင်အလွန်တရာတိုးတက်မှုဖြစ်စေခြင်းငှါစွမ်းရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတယ်။